Izvi ndizvo zvinoita peji nyowani reFirefox repamba | Kubva kuLinux
Izvi ndizvo zvinoita peji nyowani reFirefox repamba
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu, Applications, GNU / Linux
Chimwe chei shanduko dzatinogona kukoshesa mushanduro dzinotevera dze Mozilla Firefox, dhizaini yakavandudzwa yepeji rako repamba, iyo yatinogona kuwana nekutaipa nezve: kumba mu URL bar.
Inofanira parizvino kutaridzika seiyi:
Uye neshanduro dzinotevera iwe uchaona izvi zvimwe:
Muchokwadi, isu tinogona kutonakidzwa neshanduko iyi tichishandisa vhezheni inowanikwa mubazi usiku hwoga hwoga.. Unofungei? Zvirinani ini ndinoda kuve nezvose zvandinoda padhuze, kana iko kudiwa kwekutarisa kumenyu yesarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Izvi ndizvo zvinoita peji nyowani reFirefox repamba
Ini ndaisada yekare kana nyowani.
Uye chii chaigona kutaurwa nemushandisi weOpera akasimba? ¬¬
Basa rakanaka Vagadziri veFirefox. 🙂
sezvo zvinoita sekunge unofarira apuro ini ndichakuudza kuti ini zvakare ndine mac uye firefox pane mac inoenda kwete nekukurumidza chete kupfuura opera nesafari, inokurumidza kupfuura chrome !!!
Inotaridzika zvakanaka kwazvo. Tichaonawo zvimwe zvekuchinja uku muIceweasel?, Nekuti chokwadi ndechekuti zvinonyanya kukosha kuva nezvakakosha zviripo.
Chokwadi murume. Rangarira kuti Iceweasel iForogo yeFirefox.
patrizio santoyo akadaro
lol ini handigone kuibata uye kuiisa. Ndinoifarira, maita basa!
Pindura patrizio santoyo
Izvo hazvisi zvechinhu asi neOpera kwenguva yakareba iwe watove nayo padyo neiyo Speedial uye Panel.
Hauzive here kuti iwo maposta anomiswa sei kutaura zvinhu zvisinganakidze? Iyo peji rekumba randipa kunyangadzwa neiyo Spam "Adware" inosanganisirwa ipapo.
Ndinoifarira zvirinani pane yapfuura, asi ini handishandise firefox, hahaha
Ini handinzwisise kuti dambudziko nderei nekuwana iwo mamenu, kana kuti yaive mari yesimba inopfuura 2000 Kcal.
Zvakanaka, ndinosarudza yapfuura, zvinondiita benzi kuisa mabhatani imomo andisi kuzoashandisa kana mwari
Ngatione mwana .. Usazvitaura nenzira iyoyo (hausi svikiro, uye chikonzero chako hachisi chechokwadi), nekuti izvo zvekuti hausi kuzozvishandisa hazvireve kuti vamwe vanoita zvimwe chete.
Zvichaita mari yakawanda kuvhura mamamenyu, ini ndinodaro. Kana kuti uri kuenda kunoshora heni?
Chinhu chekutanga chavanokudzidzisa muchirongwa ndechekuti komputa ibenzi, chechipiri kuti mushandisi akawedzera kupusa uye simbe. Saka usatarisira pasi kusajeka kwevashandisi vazhinji
Chinhu chimwe nungo uye chimwe chinhu ichi, kuti ivo fuck kuti vape imwezve kubaya.
Izvo ndezvekuti ivo havasi kuzozvibvarura ivo pachavo nekuda kwayo
Zvikanzi vagrancy, Courage 😛
Uye hongu, mushandisi ane usimbe kunyange kudzvanya.
Ini ndinokundikana kamwe hapana chimwezve
Haisi dambudziko kuwana aya mashandiro kuburikidza nemenyu, sezvazviri kuitwa parizvino, asi zvirokwazvo zvinofarirwa kuti zvese zviri nyore. "ruoko". Kunge zvinhu zvese, vamwe vashandisi vanozvishandisa -zvakakodzera kutaura- uye vamwe havadaro.
Kune yangu chikamu ndinoifarira.
Mhinduro yako, kunyangwe ichiratidzika kunge isinganzwisisike, ine kuwirirana kupfuura zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanoshandisa Firefox havatombowana herniated kana kupotsa zvinhu uye vanotofara ... kusvika zuva iro Firefox yavo inosanganisira zvinhu (zvinhu zvingadai zvakave mune mamwe mabhurawuza kwenguva yakareba asi mune izvi zviitiko zvaive "zvisina basa" pamwe ne " kuwandisa »).
Ndinoifarira zvakanyanya, chinhu choga chandinosuwa kugona kushandisa DuckDuckGo pachinzvimbo cheGoogle pane ino peji ... kana zvinoita uye ndarasikirwa nechimwe chinhu?
Ini handizive kana ichizogona kuzviita, kunyangwe ndichifunga kuti zvingave zvakakosha kuti ishandure inova bhurawuza iyo Firefox inoshandisa nekumira, kana kuzviita nemaoko mune kodhi yeiyo nezve: kumba.
Mwari vandiregerere, asi ndinobvumirana neushingi, ndinoona yakadzokororwa chaizvo interface yainyatso shanda ,,, uye zvakatonyanya, ini ndichazoda kuwedzerwa kuve nayo sezvandaida, gondohwe reRam Devourer ,,,
Mwari haafanire kukuregerera, ndiwo maitiro ako uye anoremekedzwa. Semuenzaniso, ini handifunge kuti iyo interface yakaremerwa, zvakapesana. Asi ndiudze iwe unorevei neizvi?
uye zvakatonyanya, ndiri kuzoda kuwedzerwa kuti ndive nazvo sezvandaida, gondohwe rakakura regondohwe rinodya ,,,
Ndeupi kuwedzera kwauri kutaura nezvako? 😕
Nokuti hauna kupa maitiro ako mucheche, unozvimanikidza..
Ah oh oh, vamwe havanzwisise kuti ndezvipi zvirevo zviri ...
iyo inoitwa nemusimudziri paanoona kuti haazvifarire kana xD
Zvakanaka, ndinoifarira zvakanyanya, uye ndinofunga kuti dai ndaizoishandisa zvakakwana. Ini ndoziva zvinogona kuitwa nenzira yakajairwa asi hapana chimwe chinhu, uye isu hatifanire kuwedzeredza, izvo hazvifanire kudya chero RAM.
Ndiri kunzwa sekukanganisa kwakazara nezve peji reimba reFirefox sezvo chinhu ichocho chingadai chakaitwa kana kuiswa mumatebhu matsva. Nekuti ini ndinozvitaura: vanhu vazhinji vanoshandura peji rekumba kune iro ravanoda, kana chirongwa kana chimwe chinhu chinoshandura peji rekumba uye ivo vangave vasina iwo hunhu hwemunhu mumwe chete kuti apfuure kana kuita izvo. Kune rimwe divi, dai izvi zvaive muma eyelashes, kwete ... ndosaka zvinoita kunge kukanganisa.
zvakare mumatabhu matsva vangadai vakaisa iyo kumhanya kudhiza + hunhu hwepeji repamba + injini yekutsvaga uye vangadai vasina zano saka teedzera uye kana zvishoma zvekutanga.
Kana paine anoziva matauriro andinoita nevanhu ve mozilla kusimudza izvi navo, ndizivise uye kana iwe uchifunga kuti ndiyo pfungwa yangu, ndinovimba uchavaonawo wovaudza chimwe chinhu kuitira kuti vagone kuchinja pfungwa yezvavanofunga.
MuArch ini ndinoshandisa Firefox, asi ini ndinogara ndichichinja iyo peji renyaya yacho. Zvekutsvaga kwepamberi, ndinoona zvichishomeka. Dzimwe sarudzo, ini handidi ivo.
mhondi inouraya marara akadaro
Pakati pandinozviona zvichishanda kwete, zvinofanirwa kuonekwa.
Pindura kumurayi wemarara
Izvi zvakawandisa kufanana neiyo Chrome ... ¬_¬ ...
Pfungwa haina kushata zvachose, asi iyo skrini inogona kushandisirwa zvirinani kuti iite senge isina kuremerwa ...
Izvi zvakanaka kwazvo kune avo vanoti kana zvichinyanya kunetsa kupinda mumenu hazvisi negonzo kana keyboard asi ine chekubata tarisa kana zvichinetsa uye ikozvino nemabhatani aya zvichave nyore ini ndoda iyi interface : D
Iyo yakanaka kwazvo .. Ini ndinoda yechipiri ^ ^
Pindura Jamin Samuel
shure kwangu, sezvo ini ndisingafarire google diki, ndine peji rekumba pamusoro:
Zvakareruka: 'nezve: logo'
Rega ndive DOMESTIC YOU - MUDZIMAI akati kune FOX yake #hushamwari #kusingaperi
Zvakakomba mudiwa ... unoita kunge bot ... nei ikozvino nyora seizvi?
Nezve saiti nyowani uye zvimwe zvinhu zveXubuntu